IKhabhinethi yasehlathini efihlakeleyo - I-Airbnb
IKhabhinethi yasehlathini efihlakeleyo
Matamoras, Ohio, United States
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguBrandon
Indawo yokuhlala etofotofo evalelwe kwiihektare ezi-7 ezibekwe kwihlathi leSizwe laseWayne. Yonwabela iindlela zokuhamba zobuqu ezijikajika ehlathini ukuya kwidama elincinci lokuloba. Iindwendwe zinokufikelela kuma-63,000 eehektare zomhlaba wehlathi kunye neemayile ezingama-80 zokukhwela ibhayisekile entabeni kunye neendlela zokuhamba intaba, ukuzingela koluntu, kunye nokuqaliswa kwe-USFS Frontier Boat Launch kwimizuzu nje embalwa. I-WNF ikwalikhaya kwiindlela ezingenasiphelo ezigangathiweyo kunye negrabile ezilungele ukukhwela ibhayisekile kunye nokhenketho lwemoto nesithuthuthu.
Le ndlu intsha, yakhiwe ngesandla, yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela. Inekhitshi elinendawo yokupheka yombane, indawo yokuhlala/yokutya ejikeleze isitovu seenkuni, kunye negumbi lokuhlambela elisezantsi. Igumbi lokuhlambela lincinci kwaye libandakanya ishawa yokuhamba. Umgangatho ophezulu unendawo eyaneleyo enika ukumkanikazi kunye nebhedi yenkosi macala omabini ezitepsi. Ukongeza, kukho i-queen eyongezelelweyo isayizi kunye ne-matrasi yobukhulu bewele efumanekayo kwiindwendwe ezingakhathaliyo ngamava omgangatho kwaye igumbi lokuhlala libandakanya i-couch ehleliyo epholileyo kunye ne-air mattress ingenziwa ifumaneke.
Kukho ummelwane okude phakathi kweendlebe zengxolo enkulu. Ngenxa yentlonipho kubo, abanye abathanda ihlathi, kunye nezilwanyana ezikungqongileyo--nceda ugcine umculo kunye nenye ingxolo kwinqanaba elifanelekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Brandon
Sihlala kufutshane kodwa asiyi kuba sesiza ngexesha lokuhlala kwakho ngaphandle kokuba ungene kuthi ngenxa yokufika kwangoko ekulungiseleleni indawo. Ngokuqhelekileyo siyafumaneka ukuphendula imiyalezo kwaye, ukuba siceliwe, sinokufumaneka ukuze sincede. Unokulindela ubumfihlo.
Sihlala kufutshane kodwa asiyi kuba sesiza ngexesha lokuhlala kwakho ngaphandle kokuba ungene kuthi ngenxa yokufika kwangoko ekulungiseleleni indawo. Ngokuqhelekileyo siyafumaneka…